၁၀:၁၃ ၁၀:၁၃၊ ၁၂ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၁၃‎ ကျော်နီ ‎ Removing U_Kyaw_Ni.jpg, it has been deleted from Commons by Achim55 because: Copyright violation, found elsewhere on the web and unlikely to be own work (F1).
၀၉:၃၂ ၀၉:၃၂၊ ၁၂ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၁၄၇‎ သုံးပြည်ထောင်ခေတ် ‎ Removing 3K_Mapa.jpg, it has been deleted from Commons by Fitindia because: per c:Commons:Deletion requests/Files uploaded by Yprpyqp. လက်ရှိ
၁၈:၄၆ ၁၈:၄၆၊ ၈ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၂၇‎ သာလိကာ ‎ Replacing Common_hill_myna.jpg with File:Common_Hill_Myna,_Satchari_NP,_Bangladesh_1.jpg (by CommonsDelinker because: File renamed: #1 in set of 3; add location). လက်ရှိ
၀၂:၁၈ ၀၂:၁၈၊ ၃၁ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၂၁၀‎ နန်းခင်ဇေယျာ ‎ Removing Nang_Khin_Zay_Yar.jpg, it has been deleted from Commons by Fitindia because: No permission since 23 December 2021. လက်ရှိ
၁၇:၅၁ ၁၇:၅၁၊ ၂၈ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၂၂၉‎ မယ်မြန်မာ ဆုရရှိသူများ စာရင်း ‎ Removing Thuzar_Wint_Lwin.png, it has been deleted from Commons by Érico because: Copyright violation, see c:Commons:Licensing.
၁၇:၅၁ ၁၇:၅၁၊ ၂၈ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၉၇‎ မယ်စကြဝဠာ မြန်မာ ၂၀၂၀ ‎ Removing Thuzar_Wint_Lwin.png, it has been deleted from Commons by Érico because: Copyright violation, see c:Commons:Licensing.
၁၇:၅၀ ၁၇:၅၀၊ ၂၈ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၂၀‎ သူဇာဝင့်လွင် ‎ Removing Thuzar_Wint_Lwin.png, it has been deleted from Commons by Érico because: Copyright violation, see c:Commons:Licensing. လက်ရှိ စာတွဲ: လက်ဖြင့် နောက်ပြန်ပြင်ခြင်း
၁၉:၅၄ ၁၉:၅၄၊ ၂၅ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၁‎ မုယော ‎ Replacing Illustration_Hordeum_vulgare0B.jpg with File:Illustration_Hordeum_vulgare1.jpg (by CommonsDelinker because: Duplicate: Exact or scaled-down duplicate: [[:c::File:Illustration Hordeum vulgare1. လက်ရှိ
၁၇:၁၇ ၁၇:၁၇၊ ၂၃ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၂၁၂‎ ဂျပန်ခေတ်မြန်မာပြည် ‎ Removing State_of_Burma_Independence_Ceremony,_1943.jpg, it has been deleted from Commons by Missvain because: per [[:c:Commons:Deletion requests/File:State of Burma Independe လက်ရှိ
၁၇:၂၆ ၁၇:၂၆၊ ၂၂ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၁၈‎ ဂျီလိုရာ ဘန်ကာနို အားကစားကွင်း ‎ Removing SUGBK_14Jan18.jpg, it has been deleted from Commons by Infrogmation because: per del req.. လက်ရှိ
၂၀:၅၅ ၂၀:၅၅၊ ၁၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၄၅‎ သာသနာ့ အလံ ‎ Removing Sanshokuki2.svg, it has been deleted from Commons by Ellywa because: per c:Commons:Deletion requests/File:Sanshokuki2.svg. လက်ရှိ
၀၅:၅၇ ၀၅:၅၇၊ ၁၇ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၁၉‎ အက်ရှ်ဂါဘတ်မြို့ ‎ Replacing New_Ashgabat_-_panoramio.jpg with File:Turkmenistan_Independence_Monument,_Ruhnama.jpg (by CommonsDelinker because: File renamed: Criterion2(meaningless or ambiguous name)).
၀၉:၁၄ ၀၉:၁၄၊ ၁၆ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၁၁‎ ဟောက်မေယာ ‎ Replacing Haumea_symbol_(Moskowitz,_fixed_width).svg with File:Haumea_symbol_(fixed_width).svg (by CommonsDelinker because: File renamed: simplify).
၁၀:၀၄ ၁၀:၀၄၊ ၁၄ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၂‎ တရုတ်အလယ်ပိုင်း ‎ Replacing Zhongguo_jingji_bankuai.svg with File:China_Economic_Sector.svg (by CommonsDelinker because: File renamed: Criterion2(meaningless or ambiguous name)). လက်ရှိ
၁၀:၀၄ ၁၀:၀၄၊ ၁၄ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၂‎ ဟတ်ကာလူမျိုး ‎ Replacing Zhongguo_jingji_bankuai.svg with File:China_Economic_Sector.svg (by CommonsDelinker because: File renamed: Criterion2(meaningless or ambiguous name)).
၁၇:၅၇ ၁၇:၅၇၊ ၇ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၂၄‎ မီကိုရမ် ဂူးရေဗစ်ချ် အမ်အိုင်ဂျီ-၂၅ ‎ Replacing MiG-25.svg with File:Mikoyan-Gurevich_MiG-25_3-view.svg (by CommonsDelinker because: File renamed: Criterion4(harmonizing names of file set) · To conform to [[:w:Wikipedia:WikiPro လက်ရှိ
၁၆:၀၃ ၁၆:၀၃၊ ၄ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၁၁‎ ဆာဆာ ‎ Removing Dr_Sasa.jpg, it has been deleted from Commons by Ciell because: per c:Commons:Deletion requests/File:Dr Sasa.jpg. လက်ရှိ
၀၆:၀၈ ၀၆:၀၈၊ ၂ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၂၆‎ မယ်စကြဝဠာ မြန်မာ ‎ Removing Miss_Universe_Myanmar.png, it has been deleted from Commons by EugeneZelenko because: c:Commons:Licensing: non-trivial logo.
၁၅:၃၃ ၁၅:၃၃၊ ၃၀ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၁၃‎ မြို့ပြ အင်ဂျင်နီယာ ဘာသာရပ် ‎ Replacing 51712535185_8a25f05886_o_Crew_Dragon_fly_around_10.jpg with File:View_of_the_ISS_taken_during_Crew-2_flyaround_(ISS066-E-081311).jpg (by CommonsDelinker because: File renamed: Replace nondescriptive
၁၅:၃၃ ၁၅:၃၃၊ ၃၀ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၁၃‎ အင်ဂျင်နီယာ နည်းပညာ ‎ Replacing 51712535185_8a25f05886_o_Crew_Dragon_fly_around_10.jpg with File:View_of_the_ISS_taken_during_Crew-2_flyaround_(ISS066-E-081311).jpg (by CommonsDelinker because: File renamed: Replace nondescriptive လက်ရှိ
၀၁:၀၀ ၀၁:၀၀၊ ၃၀ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၂၃‎ ငှက်ပုစဉ်းထိုး ‎ Replacing Chestnut-headed_bee-eater_(Merops_leschenaulti).jpg with File:Chestnut-headed_Bee-eater_(Merops_leschenaulti),_Munnar,_Kerala,_India.jpg (by CommonsDelinker because: File renamed: add location for cl လက်ရှိ
၂၂:၃၇ ၂၂:၃၇၊ ၂၆ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၆၆‎ Bing Crosby ‎ Removing BING_CROSBY_24.png, it has been deleted from Commons by Cromium because: Copyright violation; can usually be uploaded to your local Wikipedia as fair use if an article exists ([[:c:C
၀၆:၁၉ ၀၆:၁၉၊ ၂၂ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၆၅‎ Miss Grand ‎ Removing Crown_for_Miss_Grand_International_(2019-2021).jpg, it has been deleted from Commons by King of Hearts because: Copyright violation: Lacks auth
၀၆:၀၀ ၀၆:၀၀၊ ၂၂ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၃၃‎ ဥဒေါင်း ‎ Removing Green_Peafowl_-_Pavo_muticus.ogg, it has been deleted from Commons by King of Hearts because: Copyright violation: Copyvio of https://www.xeno-canto.org/206560.
၁၅:၂၁ ၁၅:၂၁၊ ၂၀ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၄၃၅‎ ပနားမား စာရွက်စာတမ်းများ ‎ Removing Panama_papers_sz_chat.jpg, it has been deleted from Commons by Ellywa because: per c:Commons:Deletion requests/File:Panama papers sz chat.jpg. လက်ရှိ
၂၂:၁၀ ၂၂:၁၀၊ ၁၃ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၉၈‎ နနွိုင်း အာကွီနို အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ် ‎ Removing NAIA_Terminal_3_checkin.jpg, it has been deleted from Commons by Jameslwoodward because: per [[:c:Commons:Deletion requests/Files in Category:Ninoy Aquino International Airport Te
၂၂:၀၅ ၂၂:၀၅၊ ၁၃ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၁၂၅‎ နနွိုင်း အာကွီနို အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ် ‎ Removing Centennialphoto.jpg, it has been deleted from Commons by Jameslwoodward because: per c:Commons:Deletion requests/Files in Category:Ninoy Aquino International Airport Terminal 2.
၂၂:၀၄ ၂၂:၀၄၊ ၁၃ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၆၂‎ နနွိုင်း အာကွီနို အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ် ‎ Removing NAIA_TERMINAL_ONE_CHECK-IN_HALL.jpg, it has been deleted from Commons by Jameslwoodward because: per [[:c:Commons:Deletion requests/Files in Category:Ninoy Aquino Internat
၀၅:၃၈ ၀၅:၃၈၊ ၁၂ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၁၄၉‎ မေလင်းလက်ဆွေ ‎ Removing First_IVF_baby_in_Myanmar_-_Credit_to_Health_Digest_Journal.jpg, it has been deleted from Commons by EugeneZelenko because: [[:c:Commons:Licensi
၀၅:၃၈ ၀၅:၃၈၊ ၁၂ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၁၃၇‎ မေလင်းလက်ဆွေ ‎ Removing Record_of_First_IVF_baby_born_in_Myanmar-page_1.jpg, it has been deleted from Commons by EugeneZelenko because: c:Commons:Licensing: newspaper/magazin
၁၈:၂၈ ၁၈:၂၈၊ ၁၀ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၁၈၆‎ ကပ္ပလီကျွန်း ‎ Removing Indian_Archipelago_Territory_flag_of_the_Andaman_and_Nicobar_Islands_(proposed).png, it has been deleted from Commons by Cromium b
၁၇:၀၂ ၁၇:၀၂၊ ၁၀ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၄၇‎ မြိုကရာမာ ဘာသာ ‎ Removing မန်လေမြို.jpg, it has been deleted from Commons by Yann because: Missing essential information such as license, permission or source (F5
၁၇:၀၂ ၁၇:၀၂၊ ၁၀ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၂၉၁‎ ရှေးဟောင်းမြိုလူမျိုး ‎ Removing မြိုရိုးရာပွဲတော်.jpg, it has been deleted from Commons by Yann because: Missing essential information such as license, permission or source ([[:c
၁၇:၀၂ ၁၇:၀၂၊ ၁၀ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၁၀၃‎ မြိုရိုးရာ ‎ Removing မြိုအမျိုးသမီးတစ်ဦးရိုးရာယက်နေပုံ.jpg, it has been deleted from Commons by Yann because: Missing essential information such as license, [[:c:COM:PERMISS
၁၈:၂၅ ၁၈:၂၅၊ ၇ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း ၀‎ ယိုရှီဟီဒဲ ဆူဂါ ‎ Replacing Yoshihide_Suga_20210101.jpg with File:Yoshihide_Suga_20200916.jpg (by CommonsDelinker because: File renamed: Criterion3(obvious error) · Yoshihide Suga 20210101.jpg).
၂၁:၃၀ ၂၁:၃၀၊ ၃ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၁၄၂‎ မဟာဆိုင်းရပ်စ် ‎ Removing Cyrus_portrait.jpg, it has been deleted from Commons by Ruthven because: per c:Commons:Deletion requests/File:Cyrus portrait.jpg.
၁၈:၂၈ ၁၈:၂၈၊ ၁ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၁၀၄‎ ၂၀၁၅ အရှေ့တောင်အာရှ အားကစားပြိုင်ပွဲ ‎ Removing SGIndoorStadium.jpg, it has been deleted from Commons by Túrelio because: Copyright violation: This file is uploaded byasock withahistory of copyright violations, see [[:c:Commo လက်ရှိ
၀၅:၅၀ ၀၅:၅၀၊ ၂၆ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း ၀‎ တမ်းပလိတ်:နိုင်ငံ စာရင်းအင်း ဖင်လန်နိုင်ငံ ‎ Replacing Military_Flag_of_Finland.svg with File:Military_flag_of_Finland.svg (by CommonsDelinker because: File renamed: Criterion 6). လက်ရှိ
၂၁:၁၀ ၂၁:၁၀၊ ၂၁ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၁၁‎ တမ်းပလိတ်:နိုင်ငံ စာရင်းအင်း ပိုလန်နိုင်ငံ ‎ Replacing Flag_of_Poland_(WFB_2000).svg with File:Flag_of_Poland_(2000_World_Factbook).svg (by CommonsDelinker because: File renamed: Criterion4(harmonizing names of file set)). လက်ရှိ
၁၅:၀၆ ၁၅:၀၆၊ ၂၁ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၉‎ ဗိုက်ဖြူဆက်ရက်မဲ ‎ Replacing Asian_Glossy_Starling_Range.png with File:Asian_Glossy_Starling_ebird_data_map.png (by CommonsDelinker because: File renamed: identity).
၀၉:၅၈ ၀၉:၅၈၊ ၁၈ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၂၀‎ ပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့ ‎ Removing Mohai_of_Myanmar.png, it has been deleted from Commons by Túrelio because: Copyright violation: copyright © 2021 [https://mohai.nugmyanmar.org/ Ministry of Home Affairs and Immigra
၀၁:၀၇ ၀၁:၀၇၊ ၁၃ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၇၁‎ တမ်းပလိတ်:2019–20 coronavirus pandemic data ‎ Removing Flag_of_Honduras_(2008_Olympics).svg, it has been deleted from Commons by Jameslwoodward because: Commons:Deletion requests/Files uploaded by SpinnerLaserzthe2nd. လက်ရှိ
၀၁:၀၇ ၀၁:၀၇၊ ၁၃ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၁၀၁‎ မြောက်အမေရိကတိုက်ရှိ အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်နိုင်ငံများနှင့် အမှီအခိုနယ်မြေများ စာရင်း ‎ Removing Flag_of_Honduras_(2008_Olympics).svg, it has been deleted from Commons by Jameslwoodward because: Commons:Deletion requests/Files uploaded by SpinnerLaserzthe2nd. လက်ရှိ
၀၁:၀၆ ၀၁:၀၆၊ ၁၃ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၃၇၁‎ ၂၀၀၇ အီးမရိတ်ဖလား ‎ Removing Flag_of_Honduras_(2008_Olympics).svg, it has been deleted from Commons by Jameslwoodward because: Commons:Deletion requests/Files uploaded by SpinnerLaserzthe2nd. လက်ရှိ
၀၁:၀၅ ၀၁:၀၅၊ ၁၃ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၃၇‎ ဟွန်ဒူးရပ်စ်နိုင်ငံ ‎ Removing Flag_of_Honduras_(2008_Olympics).svg, it has been deleted from Commons by Jameslwoodward because: Commons:Deletion requests/Files uploaded by SpinnerLaserzthe2nd. လက်ရှိ
၁၅:၅၆ ၁၅:၅၆၊ ၁၀ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၂၅‎ ဝင်္ကဝိဝေကာရာမဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း ‎ Removing Kanchanaburi_montages.jpg, it has been deleted from Commons by Fitindia because: per c:Commons:Deletion requests/Files found with "Thaweesak Churasri". လက်ရှိ
၁၅:၅၅ ၁၅:၅၅၊ ၁၀ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၂၆‎ ကန်ချနဘူရီ ခရိုင် ‎ Removing Kanchanaburi_montages.jpg, it has been deleted from Commons by Fitindia because: per c:Commons:Deletion requests/Files found with "Thaweesak Churasri". လက်ရှိ
၁၈:၄၈ ၁၈:၄၈၊ ၆ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၅၂‎ ဇီးကွက် ‎ Replacing Asio_otu_2.jpg with File:Waldohreule_(Asio_otus)_Pfahlhaltung.jpg (by CommonsDelinker because: File renamed: Criterion 2).
၁၉:၅၄ ၁၉:၅၄၊ ၄ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၁၅၅‎ စူပါ မာရီယို ရမ်း(န်) ‎ Removing Super_Mario_Run_game_opening_scene.jpg, it has been deleted from Commons by EugeneZelenko because: c:Commons:Screenshot: game.
၁၃:၃၃ ၁၃:၃၃၊ ၄ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၆၄‎ မင်းရဲသိင်္ခသူ ရေငုပ်သင်္ဘော ‎ Replacing MN-Sub-P-2.jpg with File:UMS_Minye_Theinkhathu_at_the_73rd_anniversary_of_Myanmar_Navy_Day_ceremony.jpg (by CommonsDelinker because: File renamed: Criterion2(meaningless or ambigu လက်ရှိ